Sunday February 19, 2017 - 18:00:55 in Wararka by Super Admin
Ciidamada Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa silsilado weeraro ah oo khasaare xoogan lagu gaarsiiyey cadowga ka fuliyay magaalooyin ku yaalla gobolka Helmand ee dhaca koonfurta dalka Afghanistan, Iyadoona weeraradaas oo isugu jira dagaallo toos ah i
Ciidamada Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa silsilado weeraro ah oo khasaare xoogan lagu gaarsiiyey cadowga ka fuliyay magaalooyin ku yaalla gobolka Helmand ee dhaca koonfurta dalka Afghanistan, Iyadoona weeraradaas oo isugu jira dagaallo toos ah iyo kuwa qorsheysan cadowga looga dilay askar dhowr ah, dhul balaarana looga qabsaday.
Qaar ka mid ah weeraradan ayaa ka dhacay degmada la yiraahdo Marjah oo ka mid ah degmooyinka ku jira gacanta cadowga, halkaas oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen weeraro isugu jiray dagaallo toos ah iyo kuwa qorsheysan.
War ka soo baxay imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa lagu sheegay in dagaalyahanada Imaarada ay weerar ballaaran ku qaadeen saldhigga Police-ka ee degmada Marjah, ayna halkaas ku dileen, kuna dhaawaceen ku dhawaad 10 askari.
Xoogaga Taliban ayaa sheegay in dagaalkan uu ahaa mid aad u xoogan oo ay ka qeybgaleen guutooyinka kala duwan ee mujaahidiinta oo ay ku jiraan Shiishyahanno kuwaas oo ugaarsanayey ciidamada cadowga ee ilaalada ka hayey dhismayaasha cadowga ee gudaha magaalada.
Marka laga yimaado degmadaasi, waxay mujaahidiintu sidoo kale weeraro xooggan ka fuliyeen degmada Sanjin oo iyadan ka tirsan isla gobolka Helmand, halkaas oo cadowga uu kula kulmay dagaallo xoogan oo looga saaray qaar ka mid ah saldhigyadooda sida lagu sheegay war ka soo baxay Taliban.
Ciidamada tirada yar ee isbaheysiga NATO ka jooga dalka Afghanistan ayaa dhowr jeer isku dayey in ay bad-baadiyaan maleeshiyaadka ku go’doonsan magaalooyinkaas, islamarkaana ay dib u riixaan awoodda jihaadiyiinta balse ilaa hadda kuma guuleysan in ay zaxfiga Taliban ka durjiyaan goobaha lagu hardamayo.
Dad badan ayaa rumeysan in sanadkan bilowga ah ay Imaarada Islaamiga Afghanistan gacanta ku dhigi doonto magaalooyin waa weyn oo ku yaalla koonfurta Afghanistan haddii aanan la helin awood adag oo lagu hor istaago horumarrada ay dhulka ka sameynayaan.